भावुक हुँदै विवेकशील साझाका प्रवक्ताले... :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, पुस २८
विवेकशील साझा पार्टीको कार्यालय बखुन्डोलमा शनिबार दिउँसो भीड बढ्दै गयो। हलभित्र तय गरेको कार्यक्रम मान्छे धेरै भएपछि आँगनमा सारियो। प्रदेश नम्बर ३ की संयोजक समीक्षा बास्कोटाले कार्यक्रम सुरू गरिन्।
संयोजक रवीन्द्र मिश्र, प्रवक्ता सूर्यराज आचार्य, नेता मुमाराम खनाललगायत अगाडि बसे। कुनै ब्यानरबिनै अन्तरक्रिया सुरू भयो। फेसबुक, ट्वीटरबाट सूचना पाएर विवेकशील साझा पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे हुने अन्तरक्रियामा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकदेखि पत्रकारसम्म पुगे।
प्रदेश ३ की संयोजक बास्कोटाले सबैको मनमा ‘के भएको होला?, एक्कासी किन पार्टी फुट्यो? जिज्ञासाले घर गरेको भन्दै कार्यक्रमको ढोका उघारिन्।
उनले छोटो बोलिन्- वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेर अगाडि बढ्दा किन अन्यौलता आयो? यति बोलेर उनले पार्टीभित्रको पछिल्लो गतिविधिबारे प्रष्ट पार्न प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यलाई आग्रह गरिन्।
आचार्यले सहभागीलाई ‘पीडासहित स्वागत गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी पुग्यो’ भनेपछि कार्यक्रमका सहभागी भावुक भए।
मोबाइलमा म्यासेज आएपछि पार्टी फुटेको जानकारी पाएको प्रसंग उनले निकाले। ‘गोरखामा आयोजित पृथ्वी जयन्तीको कार्यक्रममा बोल्दाबोल्दै पार्टी फुट्यो भन्ने म्यासेज आयो। संयोजकजीले म्यासेज गर्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘पार्टी फुट्ने विन्दुमा पुग्यो भन्ने संकेत पनि पाएका थिएनौं।’
हाम्रो प्रेम विवाह लामो समय टिक्न सकेन- रवीन्द्र मिश्र
पार्टीभित्र एकतादेखि नै सानातिना मतभेद रहे पनि पार्टी फुटेर गइहाल्छ भन्नेमा आफूहरूले विश्वास नगरेको उनले बताए।
‘साना मतभेद गौण सम्झेका थियौं, पार्टी एकजुट हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास थियो,’ उनले भने।
उनले पार्टी एकीकरणदेखि कै सूचनाहरू तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन नसकिएको स्वीकार गरे।
‘हामी सबैजसो सूचना थाहा हुँदा त पीडामा थियौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू झन् चिया पसलमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस गर्दागर्दै पार्टी फुट्यो भन्ने खबर सुन्दा कति पीडामा पर्नुभयो होला।’
यति भनेपछि आचार्यको मुखमा शब्द आएन। उनी भावुक भए। सम्हालिन खोजे सकेनन्। ‘आइ एम सरी!’ एक पटकमा यत्ति मात्रै बोले। फेरि भावुक बने। सम्हालिन कोसिस गर्दै भने, ‘क्षमा गर्नुहोला।’
आचार्यले विवेकशील र साझा पार्टीलाई एकीकरण गर्नमा पनि योगदान गरेका थिए। उनले ती दिन स्मरण गर्दै भने, ‘पार्टी एकीकरणको वार्तामा मुमाराम खनाल र म थियौं। धेरै कुरा मिलेका हुन्थेनन्, तै पनि हामी आत्मविश्वास लिएर आउथ्यौं।’
गएको चार महिनादेखि पार्टी सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।
‘उज्वल थापाजीले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदन छलफलबाटै टुंग्याउने पक्षमा हामी थियौं। सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक डाकिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही बैठकमा मन माझामाझ गरौंला भन्ने थियो।’
१६ केन्द्रीय सदस्यसहित थापा दल दर्ता निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि आफूहरू स्तब्ध भएका उनले बताए।
‘आशामा ठेस पुगेको छ। क्षमायाचना गर्न चाहन्छु,’ आचार्यले भने।
आचार्यले यति बोलेपछि पत्रकारहरूका लागि प्रश्नोत्तर गर्न दिइयो। नयाँ भन्दा त पुरानै दल ठीक रहेछन् होइन त?, रवीन्द्र मिश्रलाई आर्थिक पारदर्शी नभएको भन्ने आरोप छ नि, पार्टी फुटेपछि सम्पत्ति बाँडफाँट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? जस्ता प्रश्न पत्रकारले उठाए।
यसअघि हसिलो अनुहारसाथ पत्रकारमाझ प्रस्तुत हुने गरेका संयोजक मिश्रको ओठमा हाँसो र मुहारमा चमक हराएको थियो।
उनले आफूमाथि लगाइएको आरोपमाथि निकै चलाखीपूर्ण तवरले जवाफ दिए।
पार्टीलाई सहयोग गर्नेको फोटोसहित रकम खुलाएर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजानिक गरेको, पार्टीको वेबसाइटमा आयव्यय राखेको दृष्टान्त पेश गरे।
‘सहयोग रकम, ठाउँ र व्यक्तिको नामसमेत फेसबुकमा राखेका छौं, त्योभन्दा आर्थिक पारदर्शिता अरु के चाहियो?’ मिश्रले भने, ‘अडिटरले अडिट गरेको र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रति वेबसाइटमा छ, त्यो हेर्नुस्।’
पार्टीको सम्पत्ति बाँडफाँटबारे सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले यो प्राविधिक र कानुनी कुरा भएको बताए।
उदाहरण दिए- अनपेक्षित रूपमा यो घटना घटेको हुनाले यो हामीले बुझ्नै पर्छ। जसरी भूकम्प आउँदा मानिसले घरमा तयारी सामग्री राखेका थिएनन्, भूकम्प आएपछि सुरू गरे, त्यसैगरी हामीले पनि यसबारे सोचेका थिएनौं, अब तयारी गर्नुपर्ला।
आफूमाथि लगाइएका विभिन्न आरोपबारे छोटकरीमा उनले कुरा राखे- तपाईंहरूले जति उक्साए पनि म एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने पक्षमा छैन। मिश्रले आफूले विधि र प्रकृया कहीँ पनि नमिचेको बताए।
‘उज्वल जीको प्रतिवेदन विधि र प्रक्रिया मिचेर लेखेको प्रतिवेदन हो। तै पनि छलफल गर्ने पक्षमा थियौं,’ उनले टुंग्याउनु अघि भने, ‘पार्टी फुटाउने संकेत केही अघि एउटा फेसबुकको म्यासेजबाट भएको रहेछ। त्यसको स्क्रिनसट हामीसँग छ।’
विवेकशील साझाबाट अलग्गिएका १६ जनाको वक्तव्य
किन टिकेन विवेकशील र साझाको एकीकरण?
उज्वल थापालाई रवीन्द्र मिश्रको आग्रह- नजानेको यात्रामा कमजोरी भयो होला, आउनुस् सँगै हिँडौं
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २८, २०७५, ०६:४४:००
नेकपामा पूर्वएमालेतर्फका सचिवालय सदस्यले पाए रोजेको विभाग